आईओएस .7.1.१ ले आईफोन on मा प्रदर्शन सुधार गर्दछ र HFP अडियो प्रोटोकल समावेश गर्दछ आईफोन समाचार
आईओएस .7.1.१ ले आईफोन on मा प्रदर्शन सुधार गर्दछ र एचएफपी अडियो प्रोटोकल समावेश गर्दछ
कारमेन रोड्रिग्ज | | iOS 7, आईफोन 4
एप्पल जारी भयो iOS 7.1 हिजो, पहिलो प्रमुख अपरेटिंग सिस्टम अपडेट गत बर्ष पुन: डिजाइन गरिएको मोबाइलको रूपमा। अपडेटमा समावेश गरीएको केही मुख्य सुविधाहरू छन् CarPlay तर पनि सामान्य ट्वीक्स र सुधारको एक किसिम त्यसले प्रणालीलाई राम्रो बनाउँछ।
यी सुविधाहरू मध्येको छर दुई त्यो महत्त्वपूर्ण भए पनि, तिनीहरूले मिडिया कभरेज हासिल गरेनन्: आईफोन of को प्रदर्शनमा ठूला सुधार र नक्सा अनुप्रयोगमा HFP भन्ने कुरा केहि छ, अब हामी हेरौं।
1 आईफोन performance प्रदर्शन सुधार
2 नक्शामा HFP
आईफोन performance प्रदर्शन सुधार
आईफोन on मा आईओएस used प्रयोग गरेको जो कोहीले पनि प्रमाणित गर्न सक्दछ, पुरानो हार्डवेयर हो पछिल्लो सफ्टवेयरको साथ राख्न असमर्थ। निर्जन दृश्यहरू र अन्य छुटहरू पनि छन् जुन चीजहरू सुचारु रूपमा चलाउन प्रयास गर्दछ, सम्पूर्ण प्रणाली बिभिन्न समस्याहरुबाट ग्रसित थियो.
अपग्रेड गर्दै संस्करण .7.1.१ ले यी मध्ये धेरै जसो समस्या समाधान गरेको छ। एनिमेसनले अब प्रतिक्रिया दिन समय लिन सक्दैन र सामान्य रूपमा तिनीहरू अघिल्लो संस्करणको तुलनामा धेरै छिटो हुन्छन्।
माथिको सूचीबद्ध दोस्रो सुविधा भनेको नक्सा अनुप्रयोगमा HFP को थप हो। HFP एक ह्यान्ड्स-फ्रि प्रोफाइल हो जसले ब्लुटुथ हेडसेटहरू र ह्यान्ड्स फ्री कार किटहरू आईफोनसँग कुराकानी गर्न सक्षम गर्दछ।
IOS को पछिल्लो संस्करणहरूमा, यदि तपाईंले ब्लुटुथ मार्फत तपाईंको आईफोन कारमा जडान गर्नुभयो र नक्शा नेभिगेसनको साथ शुरू गर्नुभयो भने, तपाईं केवल निर्देशनहरू सुन्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो यदि तपाईंसँग रेडियो छैन भने। आईओएस .7.1.१ को साथ, यो लागू गरियो नयाँ अडियो सेटिंग नक्सा अनुप्रयोगमा जुन तपाईं HFP प्रोटोकोल सक्रिय गर्न अनुमति दिनुहुन्छ, जसको कार्य कारलाई भन्नु हो प्लेब्याक रोक्न कहिले संगीत वा रेडियो सुन्न ताकि तपाईं नक्सा अनुप्रयोगबाट निर्देशनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। यसले अनिवार्य रूपमा यसलाई फोन कलको रूपमा काम गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईओएस .7.1.१ ले आईफोन on मा प्रदर्शन सुधार गर्दछ र एचएफपी अडियो प्रोटोकल समावेश गर्दछ
मसँग आईफोन have छ, र यदि यो सत्य हो भने सबै कुरा छिटो हुन्छ, तर धिक्कार मेरो ब्याट्री त्यो बेकार छ कि। आज बिहान मसँग4०% थियो र अहिले यो ओटीए मार्फत अद्यावधिक गर्न यसलाई प्रयोग गरेर मसँग 90 ​​37% बाँकी छ। ठिक छ, सत्य यो हो कि मैले यसलाई सामान्य देखेको छैन।
एड्रियन स्यान्टियागो (@ kbomac) भन्यो
तपाईको आईफोन the को ब्याट्री बदल्नुहोस् निश्चित रूपमा यो already बर्ष पुरानो हो।
एड्रियन स्यान्टियागो (@kbomac) लाई जवाफ दिनुहोस्
आईओएस .7.1.१ ले तपाईंलाई पहिलै नै साइलेन्ट मोडमा भाइब्रेटर हटाउन दिन्छ यदि तपाईं बैठकमा हुनुहुन्छ वा सुतिरहेको छ र तपाईं कम्पन चाहनुहुन्न। pic.twitter.com/TtamqLFYVA
Ksjdhf लाई जवाफ दिनुहोस्
यो हुन सक्छ कि हो, तर अपडेट हुनुभन्दा पहिले म यति तरल थिएन, तर मैले त्यति धेरै खर्च गरिरहेको छैन।
तर यो हास्यास्पद छ, मेरो दुई १--मिनेट कलहरू छन् र अझै 15 37% छ, म बाहिर आउँदैछु।
जेभियर, आईफोन user प्रयोगकर्ताको रूपमा म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि केबल मार्फत अपडेटहरू गर्नुहोस् किनकि मलाई किन थाँहा छैन, जब म ओटीए मार्फत अपडेट गर्दछु ब्याट्री छिटो पग्लन्छ। मैले अहिले सम्म यस संस्करणमा अपडेट गरेको छैन किनकि मलाई तुरून्तै मैले यात्राको लागि जेलब्रेक चाहिन्छ। त्यसो भए पछि सुरक्षित कुरा अपडेट गर्नु हो। शुभकामना
फ्र्यान्क्सिनलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि कसैले मलाई पुष्टि गर्न सक्दछ भने। यो बीटा देखि भइरहेको छ, सही? किनकि म यो ब्यबहार लामो समयदेखि देख्दै छु र मलाई थाहा भएन कि यो बीटाको कारणले हो, मलाई लाग्यो कि यो टोमटमको केही अपडेट हुनेछ, यो मेरो हातमा कलको रूपमा बाहिर आयो। त्यो, वा म xD मिसिंद भइरहेको छु। त्यसो भए पनि, मैले भन्नु पर्दछ कि त्यो धेरै आरामदायक छ ... मैले फोनबाट संगीत पाउनु अघि (जुन मार्ग द्वारा, bluetooh द्वारा मलाई यो तरिका मनपर्दैन) ध्वनी, म एक विशेष कान छ ...) र मैले गाडी रेडियो को लागी सक्षम गर्न को सट्टा आईफोन मा बजाएको वा संगीत संग राख्नु पर्छ वा जे मैले चाहानुहुन्छ ...
मिनीलाई जवाफ दिनुहोस्
यो HFP सुविधा कसरी सक्रिय छ? म माथि कहिँ पनि स्क्रिनसट फेला पार्न सक्दिन। TOM TOM यो पनि छ?
ठिक छ, म एउटा ग्रब बग देखिरहेको छु। मेरो 5s मा भोल्यूम स्पिकरहरूको साथ उच्च छ र हेडफोनको साथ धेरै कम। हामी भन्न सक्दछौं कि यसले भोल्युमका २ थप लाइनहरू हराइरहेको छ। एप्पल मा कसैले ध्यान दिएका छैन? GRrrrrrrr
म अद्यावधिकसँग धेरै खुसी छु, तर के पर्दाको तल भिन्न रंगमा परिवर्तन गर्न सकिदैन? (जहाँ fixed फिक्स्ड आइकनहरू छन्) चिनियाँको खैरोले केहि पनि हिट गर्दैन।
Ismse लाई जवाफ दिनुहोस्
आईएसएमएस, सेटिंग्स-सामान्य-पहुँच-वृद्धि कन्ट्रास्ट र निष्क्रिय पारदर्शिता कम।
Jsimao लाई जवाफ दिनुहोस्
म HFP कसरी सक्रिय छ पत्ता लगाउन सकिन। : कसैलाई थाहा छ यो कसरी गर्ने:?
जुआन्जेलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई के यस अपडेटको बारेमा कम मनपर्दछ कि सम्पर्क फोटोहरू बाहिर आउँदछन् जब उनीहरूले तपाईंलाई कल गर्छन् वा कल गर्छन्! किन तिनीहरू यसलाई छोडेनन्? 🙁
मुद्दामा जवाफ दिनुहोस्
मैले भर्खर अपडेट गरें र निधारमा पहिलो (आईफोन)) इन्टरनेट सेयरिंगले काम गर्दैन, मैले सामान्य रीसेटहरू बाहेक सबै सम्भावित तरिकाहरूमा यसलाई प्रयास गरेको छु र, म भोको छु, एकदम थकित छु भन्ने छैन आईफोनको साथ स्याउको बारेमा अरू केहि पनि जुन संस्करण x.x बाट x.x मा जान्छ र अब केसमा मैले बेकार x.x पहिलो पटक सिकेन
मलाई आशा छ कि स्याउ को भद्रजनहरु एक पटक ... एक पटक समाधान गर्नुहोस्। र त्यसपछि टच नगर्नुहोस्। तिनीहरू भन्छन् रूपमा; के काम गर्दछ यो छुन छैन !!!
यो एउटा त्यस्तो कुरा हो जुन उनीहरूले हामीलाई यति धेरै समस्या बिना पछाडि जान अनुमति दिए ... प्याटेरो, आईफोन for को लागि सबै भन्दा राम्रो; संस्करण x.x
के तपाईं यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? मेरो अपरेटरले मलाई -लब्जिकली- Apple मा दर्शाउँछ। यसले मेरो केसमा "शेयर इन्टरनेट" पहुँच पोइन्टको नाम "सुरक्षित" गर्दैन, र धेरै विचार गरेपछि यसले मलाई मेरो वाहकको साथ जाँच गर्न भन्छ।
नमस्कार, यस समयमा केही पनि छैन, मैले यसबारे धेरै चोटि धेरै चोटि प्रयास गरेको छु, म सिमियो प्रयोग गर्दछु र मैले कहिले पनि कुनै संस्करणहरू जेलब्रोन गरेको छैन।
मैले क्यारियर सिम्योलाई केहि सोधेको छैन, मलाई लाग्दैन कि यो उनीहरूको गल्ती हो, मसँग iPhone.x को साथ अर्को आईफोन and छ र यो अझै समान सिम्यो कम्पनीमा राम्रो काम गर्दछ।
म शून्यबाट बहाल गर्न चाहन्छु, तर यसले मलाई एक स्टिक दिन्छ, यदि एक दिनमा एप्पलले आफैंले उच्चारण गर्दैन भने म पुनर्स्थापना गर्न कोशिस गर्नेछु।
मसँग आईफोन4छ, र आईओएस .7.1.१ को अद्यावधिक पछि म एक हल्का निलो तस्विर पाउँछु जुन अनुप्रयोगहरू खोल्दा पनि सबै स्क्रिनमा जान्छ। मलाई थाहा छैन यो के हो वा म यसलाई कसरी हटाउन सक्दछु किनकि यसले चिन्ता गर्दछ।
नमस्ते, यहाँ एक अर्को छ इन्टरनेट साझा समस्या को साथ। अद्यावधिक गर्नु अघि यसले कुनै समस्या बिना काम गर्यो र त्यसपछि केहि पनि छैन। मैले मेरो सिम अर्को उपकरणमा राखेको छु र यो ठीक काम गर्दछ। मैले पुनर्स्थापना गरेको छु र यो उस्तै रहन्छ। हेर कि कसैले समाधान फेला पारे कि।
यो घिनलाग्दो छ, लानती अपडेटले मात्र समस्या दिन्छ, तपाईं इन्टरनेट साझेदारी गर्न सक्नुहुन्न, यो सबैमा टिकाउँदैन, ब्याट्रीले काम गर्दैन, ब्लूटआउकले काम गर्दछ। म फेरि मेकानिकल एप्पल उत्पादन कहिल्यै खरीद गर्ने छैन, तिनीहरू घृणित छन्।
.7.1.१ को अपडेटमा कल प्राप्त गर्दा मैले आवाज गुमाएँ। उसले मलाई भाइब्रेटरसँग कुरा गर्यो। मैले यसलाई पुनःसेट गरेको छुँ, ध्वनिलाई छुवाएँ छु आदि। र केहि पनि छैन। स्याउ संग के ऊब।
Goyo लाई जवाफ दिनुहोस्
मडालिना कर्नेट भन्यो
मैले सबै मल्टिमेडियामा ध्वनी गुमाएको छु, कि, भिडियोहरू, यूट्यूब संगीत, तर कलको आवाजले मेरो लागि काम गर्दछ, यसले चुक्छ।
मडालिना कर्नेटलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग नीलो वर्ग छ जुन उफ्रिदै छ र म यसलाई बाहिर निकाल्न सक्दिन। कसैलाई थाहा छ कि यसलाई कसरी निकाल्ने? ???
नमस्कार, मसँग यो IOS 7.0.4 मा थियो र सत्य यो हो कि ढिलो असहनीय थियो; मैले गुमाउनुपर्ने केही कुरा नभएकोले, म DFU मोडमा आईफोन राखेर .7.1.2.१.२ मा अपग्रेड गर्‍यो र… कस्तो अचम्म !! यो धेरै फ्लुइडमा जान्छ, मलाई यो लाग्दैन कि मेरो हातमा ईट्टा छ, यो आईओएस the को प्रवाहमा पुग्न सक्दैन तर मोबाइललाई पहिले जस्तो प्रयोग गर्न कष्टकर हुँदैन।
म सिफारिस गर्दछु DFU मोडमा टर्मिनललाई अद्यावधिक गर्ने वा पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईंसँग जेलब्रेक छ।
बुकबुक, तपाईंको आईप्याडलाई मूल पुस्तक कभरको साथ सुरक्षित गर्नुहोस्